Mass Media na Mass Social Networks = NA-adaghị | Martech Zone
Fọdụ ndị folks kwenyere na nke ahụ ụwa dị larịị n'ihi Internetntanetị. M ekwenyeghị.
Maywa nwere ike ịtọ si n'echiche data na ịba uru… mana nke bụ eziokwu bụ na oke ala dị n'etiti ndị mmadụ ka bụ ihe ịma aka dị egwu. Mụ na otu ndị ọrụ na-arụ ọrụ oge niile na India ma nwee ike ịgwa gị na, n'agbanyeghị na ndị otu ahụ nwere ezigbo ikike, nkwukọrịta na ịtọ ntọala akọwapụtara nke ọma na ihe kacha mkpa dị mkpa karịa ọdịiche dị na ebe. Mụ na ndị otu m na agbasi mbọ ike ikwurita okwu.
Achọghị m ka mụ na ndị ọzọ rụkọọ ọrụ karịa otu m nwere ugbu a, mana ọgbakọ na-akpọ nhapụ, nsogbu ezumike, oge oge, asụsụ… ihe ndị a niile na - eweta ihe ịma aka na - ewepu arụpụtaghị ihe anyị ga - enwe ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ọnụ ụlọ nke ọzọ. Iswa dị ọ bụghị elu.
N'abalị a, enwetara m akwụkwọ ịkpọ oku na beta ụlọ ọrụ ngwa ngwa, ebe akwụkwọ akụkọ ahụ na-ebupụta netwọkụ mmekọrịta siri ike, nke siri ike gafee ndị nwere mmasị na akwụkwọ akụkọ ha. Aga m enyere beta aka ịnwale ngwa ahụ otu ugboro n'izu ma ọ bụ karịa - mana ekwenyere m na ọdịnihu nke netwọkụ dị njọ.
Dị ka m nwere ike isonye na Companylọ Ọrụ Ọsọ, eziokwu bụ na m ka na-arụ ọrụ na Indianapolis, Indiana. Heck, enwere m ndị na-agụ blọgụ m na-arụ ọrụ na West-n'akụkụ nke obodo nke na enweghị m ike ijikọ ma rụọ ọrụ na ọnwa isii gara aga. Ọnọdụ, ọnọdụ, ọnọdụ… ọ bụ ihe niile.
Ya mere - ka anyị kwuo na m hapụrụ mgbalị m na ịkparịta ụka n'inntanet Obere Indiana ma rụọ ọrụ iji guzobe netwọk na njikọ ọkachamara na professionallọ Ọrụ Ọsọ. M ga-erite uru? Echeghị m otú ahụ. Enweghị m ike ịzụ zigzag n'ofe mba ahụ, ma ọ bụ na achọghị m ịhapụ oge ahụ dị oke ọnụ.
Shel ribbed m ụbọchị nke ọzọ dị ka naanị nwa okorobịa na-agbarụ na Indiana. Adịghị m, n'ezie, mana amata na ọnọdụ m dị na mpaghara ejirila blọọgụ m yana ụlọ ọrụ m.
Tupu ị malite iju, a ga m eme ka ị mara na enweghị m atụmatụ imegharị ruo ọtụtụ afọ. Nwa m nwoke bụ nwa akwụkwọ na-aga nke ọma na IUPUI na nwa m nwanyị bụ 13 ma gbue m ma ọ bụrụ na m kpọpụ ya site na ndị enyi ya, ndị egwu, ụlọ akwụkwọ afọ, wdg. Ebe a na Greenwood, Indiana. Ozugbo ha si n'ụlọ na nke onwe ha, m ga-echebara ya echiche nke ọma.
Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n’ime anyị na-arụ ọrụ n’ụwa niile. Ikekwe ọbụna ole na ole n'ime anyị chọrọ n'ezie. Worldwa, dị ka anyị si hụ ya, dị mpaghara, anyị ga-anọgide na-arụ ọrụ ma biri na mpaghara. Anyị na-eme enyi n'obodo, netwọkụ azụmaahịa na mpaghara, ma na-akwụ ụgwọ na mpaghara. Ọ bụ ya mere netwọk mmekọrịta ọha na eze dị ka Companylọ Ọrụ Ọsọ na-adaba na ọdịda - ha elegharala ọdịdị ala anya dị ka isi ihe na ịkparịta ụka n'networkntanet.
Ozokwa, Companylọ Ọrụ Ọsọ Ahụ agaghị amata otu esi arụzu azụmahịa na mpaghara. Hoosiers nwere ụkpụrụ dị iche iche nke azụmahịa. Anyị na ndị enyi gị na ndị asọmpi na-abụkarị enyi ma kesaa akụ na ụba mmadụ na ikike si n'akụkụ a. Obere Indiana amalitere izu ole na ole gara aga, okporo ụzọ adịlarị ọtụtụ mpaghara mepee ụlọ ọrụ mgbasa ozi 'oke'.
Hụ gị n'ime Obere Indiana! Ndo, Ụlọ ọrụ na-agba ọsọ!
Tags: iche ihu igwe
Naanị m na-ekwupụta isiokwu ahụ ma nke a bụ ihe m gụrụ.
ụlọ ọrụ ngwa ngwa
elekọta mmadụ na netwọk
Nke a abughi ụzọ mkparị na-agwa gị kama ọ bụ karịa nke nkwekọrịta zuru oke na gị.
Ntanetị mmekọrịta ọzọ? Groan… Puh-mgbazinye. Ọ bụ na anyị ezughi ugbua. Ike gwụrụ m na Facebook, My Space dị ka 1996 html wasteland.
Isntanetị na-eche ihu ịkparịta ụka n'Socialntanet. Nye m ezumike, na-echetara m ngwaahịa ọhụrụ maka Ahịa Ahịa ụlọ ebe onye ọrụ gị nwere ike mepụta netwọkụ mmekọrịta ha maka ndị ahịa yana ndị ahịa nwere ike ịmekọrịta onwe ha ma nwee ndị ọrụ ahụ na-ele ha anya mgbe niile.
Nzaghachi m bụ “olee uru ọ bara?” ahịa gị na-agaghị na-elekọta mmadụ na netwọk. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga nke ọma n'ịzụ ahịa netwọkụ mmekọrịta ị kwesịrị ijikọ / sonye na ha na ntanetị mmekọrịta ha.
Jenụwarị 27, 2008 na 12:11 PM
Anyị kwenyere kpamkpam, Loren. Ihe m na-ede bụ ịdọ aka na ntị nye ụlọ ọrụ niile na-eche na ha ga-awarịrị na Social Networking bandwagon iji chekwaa ọnụnọ weebụ ha. Izu ole na ole site ugbu a, ha ga - abụrịrị ọtụtụ ego mmepe na ịkọ isi ha na - eche ihe kpatara na ọ naghị arụ ọrụ.
Ọ bụghị naanị teknụzụ ma ọ bụ saịtị ndị mmadụ nwere mmasị na ya, ọ bụ netwọkụ dị mkpa - onye, ​​ebe… na ọkachasị gịnị kpatara ya?!
Jenụwarị 27, 2008 na 2:09 PM
Ee, ekwenyere m.
Mmụba nke netwọkụ mmekọrịta na-abịaru nso na ọnụ ụzọ mkpọtụ ahụ.
Otu ihe m ga-ekwu bụ na m rụrụ ọrụ na India maka afọ 3 (ọ bụghị ndị mmadụ nọ na India, mana na Rajasthan), na ọtụtụ nsogbu ndị a ị na-ekwu bụ n'ihi nnukwu nsogbu infra-structure. Ya bụ ike na-aga aghara aghara dịkarịa ala ọtụtụ ugboro n'ụbọchị!
Ọzọkwa, amaghị m na ị bụ onye Indy. Mụ onwe m bụkwa. Bịara n'okporo ụzọ Rockville, na-ekwu maka IUPUI - Ọ bụ ebe m gara ụlọ akwụkwọ!
Ka o sina dị, ọmarịcha ọkwa. Echere m na ọtụtụ ndị nọ na blogosphere bụ ihe ọ bụla na-ewe iwe na ụdị netwọk mmekọrịta ndị a.
Jenụwarị 28, 2008 na 12:50 PM
Jenụwarị 27, 2008 na 4:38 PM
Heh. Nke a dị nnọọ ka xenophobia Hoosier kpọm kwem
Ma kpọrọ ... ezigbo post. Ana m arụ ọrụ na nnukwu ọrụ ma na-achọta ihe ịma aka dị ka ị na-akọwa n'agbanyeghị na onye ahịa nọ ebe a na ezi 'ole USA (mana ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị nọ na Indiana. 🙂 Achọpụtara m onwe m ide ederede ogologo oge iji kọwaa echiche nke na-ewe oge dị ukwuu, mana n'ezie enweghị m ike ịrụ ọrụ ahụ maka ha afọ 10 gara aga.
OTOH, a na m achọta ihe bara oke uru na-esite na ya pụta. Forcedbụ onye a manyere ịkọwa ihe na email na-enye m nnukwu akụkọ ihe mere eme nke mkpebi ahụ ma na-enyekwa m ọdịnaya m nwere ike mechaa nwee m mgbe m mechara ọrụ a ma (nwere ike inwe olile anya) bido ịde blọgụ ọzọ.
Achọpụtara m na m ga-enwe ike ịbịaru ọrụ yiri nke a ma nwee ike iji ọtụtụ n'ime ihe m dere nye ha na-agbagha ntuziaka m jere.
Akụkụ nke a bụ onye ahịa m dị oke njikere ịnara nduzi m ma hapụ m ka m kọwaa ihe ma kwenye na ha karịa ịlụso m ọgụ na ndozi m. Enwere m obi ụtọ n'ụzọ ahụ, n'adịghị ka gị mgbe ụfọdụ.
JMTCW agbanyeghị. 🙂
Jenụwarị 27, 2008 na 4:53 PM
Oh kwa, ị na-ekwu na ọdịnihu nke ịkparịta ụka n'socialntanet mmekọrịta dị njọ ma ị na-elekọta Nta Indiana. Ọ bụ na ị naghị anwa ikwu kama ikwu na netwọkụ mmekọrịta ọhụụ chọrọ mkpa njikọ siri ike ma na nke gị bụ ọdịdị ala na (dịka) omenala ndị ọzọ?
Papa m so na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị ma eleghị anya afọ 15 ugbu a. Ọ na-akpọ a nzipu ozi ndepụta n'ihi na ndị mmadụ (ukwuu n'ime ugbu a iji) nwere a akpan akpan anam na nlereanya nke ọgba tum tum na naanị na-emepụta na USA maka 3 afọ na e mepụtabeghị ahụ kemgbe 1991. Ya na-elekọta mmadụ na netwọk dị ike karịa ihe ọ bụla web- dabere na netwọk mmekọrịta m ahụbeghị (Facebook gụnyere), ọ na-ahazi onwe ya ma jikwaa ya na email. O siri ike na ha enweela nnọkọ kwa afọ yana ole na ole dịka ebe 2 na ọtụtụ ebe 4 gburugburu USA maka afọ 10 gara aga. Yabụ na netwọkụ mmekọrịta anaghị * enwee ike ịbụ mpaghara ka ike wee sie ike, naanị ha chọrọ njikọkọ ọnụ siri ike (n'agbanyeghị na mpaghara bụ otu nkekọ siri ike nke dị.)
Nke ahụ kwuru, ka anyị chee na ịchọrọ ịgbalị ịwulite netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị maka onye na-ebipụta akwụkwọ ma ka anyị kwuo na onye ahịa nwere oke mmasị (ikekwe ọgba tum tum.) Kedụ ka ị ga - esi mee ya ebe enyere gị echiche gị na netwọkụ mmekọrịta iwe?
Jenụwarị 28, 2008 na 12:54 PM
Echere m na isi m edoghị anya. Isi okwu m bụ netwọ mmekọrịta “MASS” ga - abụ ọdịda - mana netwọkụ mmekọrịta “MICRO” - ndị nwere ebumnuche doro anya ma ọ bụ ndị na - ege ntị ga - aga n’ihu ịba ụba. Ihe omuma atu gi nke ndi n’ile anya Mgbaala zuru oke - enwere m ike ihu ezigbo netiti mmadu nke gha adi nma.
N'okwu a, ihe atụ m bụ FastCompany na-ewulite netwọkụ mmekọrịta ọha na eze maka ndị na-agụ ha. Ọ bụ oke okwu sara mbara na enweghị ohere itinye uche na otu, isiokwu, nsogbu, ma ọ bụ ọbụbụ ọdịdị ala.
Ndị a na-ajụ Mass dị iche iche na-eche na 'Social Network' bụ ụda na-esote ha niile chọrọ ịmalite otu. Ha na-aga ibibi!
N'ebe a na Indianapolis, enwere IndyMoms na IndyPaws networks netwọkụ mmekọrịta abụọ na-etinye uche ma gbasara ala ma site na isiokwu… ma ha abụọ na-eme ọfụma.
Jenụwarị 27, 2008 na 5:15 PM
Echere m na otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-efu isi nke ịntanetị bụ http://www.honeyshed.com. Ya kọwara dị ka ụlọ ahịa osobo MTV. Ana m ekwu booo.
Ihe mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche dị iche iche na-egbutu ya na ịntanetị, ọ dị mfe iji gbanyụọ ma gbanye ya. Ọbụna ana m ajụ ikike nke saịtị niche mmekọrịta ebe ọ bụ na facebook mepere API na nnukwu onye ọrụ ya na-eme ka ọ bụrụ ala chara acha maka ndị mmepe iji ya.
Jenụwarị 27, 2008 na 7:23 PM
Na-akpali post. Apụrụ m ikwu n’ezie na ọ dịla anya m na-ekwusa ozioma yiri nke a.
Ihe ịma aka bụ isi bụ otu ụzọ ndị mmadụ si ekwu okwu na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụmụ mmadụ nwere mmasị na mmụọ site na okike, ha ka chọrọ ihe jikọrọ ọnụ na nke ahụ nwere ike ịbụ ala ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ okpukpe, agbụrụ, isiokwu, agụmakwụkwọ ma ọ bụ ndị ọzọ. Nnukwu netwọk dị ka MySpace na Facebook anaghị enye aka na nke a ma ya mere ha ga-anọ n'ọnọdụ nke abụọ na netwọkụ ọhụụ kwesịrị ịpụta iji dozie nsogbu ahụ.
Ihe ịma aka nke abụọ bụ na ozi dị ebe ahụ dị ukwuu na pere mpe n'ihi na enweghị ndị editọ 'ma ọ bụ' ndị ọkachamara 'na-etinye ọdịnaya ahụ. Nke a ga - eme ma ọ bụrụ na netwọkụ na - adịwanye ntakịrị ma na - elekwasị anya karịa ma yabụ ozi ahụ na - elekwasị anya karịa ma na - atụ anya na a ga - enyocha karịa ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ndị nwere ihe ọmụma dị mkpa na - atụnye ụtụ.
Jenụwarị 28, 2008 na 12:55 PM
Ọma tinye, SBM! Echere m na saịtị ndị na-eme nke ọma bụ ndị editọ ma ọ bụ ndị nchịkwa na-echebara isiokwu ndị ahụ echiche ma na-akpali ndị otu ahụ!